मंसिर १२, २०७८ निलम पंत
हरेक वर्षको २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बर १६ दिन सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध एैक्यवद्धता जनाउन र जनचेतना कायम राख्न विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९९ को महासभाले नोभेम्वर २५ लाई महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । विभिन्न अध्यनहरु अनुशार संसारभरिका प्रत्येक तीन महिला मध्य एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनैनकुनै प्रकारको हिंसा भोगेका हुन्छन् ।
धेरैजसो हिंसा उनीहरुकै निकट, विश्वासपात्र, प्रेमी या जीवनसाथीबाट भोगेका हुन्छन् भन्ने छ । अर्को अध्ययनले संसारभरीका ३५ प्रतिशत महिलाहरुले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक वा यौनजन्य हिंसाको शिकार भएका हुन्छन् भन्ने तथ्याकंले देखाउँछ । तर विपरित लिङ्गि प्रति आकर्षित हुनु भन्दैमा आकर्षणको अर्थ हिंसा होइन । कर–काप होइन माया, तर्क होइन । भावना अनि शरीर हैन मन जित्न सक्ने पुस्ताको खाँचो छ भन्ने हो । नयाँ पुस्ता यसमा चुक्यो भने हिंसाले मात्र प्रश्रय पाउँछ । त्यसैले त हरेक बर्ष समाजमा हुने विभिन्न खाले हिंसा न्यूनिकरण गर्न १६ दिने अभियान भन्ने विषयले स्थान पाएको हो । यो बर्ष पनि यो अभियान जोडतोडका साथ चलिरहेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिका चाही यो बर्ष के गरिरहेको छ ? महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी प्रमुख रञ्जना पण्डितसंग मध्य नेपाल सन्देशले गरेको बिशेष कुराकानी :-
१) यस वर्ष महानगरपालिकाले १६ दिने अभियानलाई कसरी मनाउँदै छ ?
हाम्रो महिला मन्त्रालयले संघीय मामिला मार्फत चाहि सबै ठाउँमा पत्राचार गरेको छ । समन्यव समिति मार्फत पनि पत्राचार गरिन्छ । त्यसरी हामीले भव्यरुपमा मनाउदँछौ । अरुबेला कोभिडले गर्दा कार्यक्रमहरु अति संकुचित भए पनि यो वर्ष चाहि अलि भव्य रुपमा गरिदैछ । माथिबाट पनि परिपत्र भएको हुनाले र महानगरले पनि त्यहि हिसाबले तयारी गर्दै छ ।
विभिन्न संघ संस्थाहरुसंग समन्वय संगसगै हाम्रो आन्तरिक कार्यक्रम पनि छ । जिल्लास्तरमा पनि हामीले कानूनी साक्षात्कार वकिलहरुलाई पनि ल्याएर र अरु सरोकारवालाहरुसंगको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्ने ७ वटा योजना छ । नगरस्तर र वडास्तरमा पनि कार्यक्रम छन् । हाम्रो सहकारी संस्था नौ वटा ग्रामिण भेगमा छन् । यसलाई समेटेएर कार्यक्रममा सहभागी गराउँछौ । धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुलाई यो थाहा होस् कि यो १६ दिने अभियान कार्यक्रम भनेको के हो ? यो राष्ट्रिय अभियान संगसंगै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि यसलाई व्यापक रुपमा मनाउँदै आएको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो भएको र यसलाई एउटा कार्ययोजना बनाएर १६ दिन कार्यविधि २०७६ अनुसार नै नगर र वडास्तर सम्म कार्यक्रम गरिदै छ ।
२) सात वटा कार्यक्रम भन्नु भयो त्यो भनेको के हो ?
हामीहरु संघ संस्थासंगको समन्वय गरी सडकनाटक र ¥याली कार्यक्रम हुन्छ । यो कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी त्यस्तै महानगरको प्रमुख, उपप्रमुख र विद्यालयका भाइवहिनी सबैलाई सामूहिक रुपमा उपस्थित गराएर गर्ने हो । दाइजोप्रथा र बालविवाहलाई फोकस गरेर पनि कार्यक्रम गर्दैछौं । अब २ नं. प्रदेशमा नै यो घटना धेरै भएको भएर यसलाई अलि बढी फोकस गरेर सडकनाटक गर्ने सोचिरहेका छौ । महानगरले मात्रै आन्तरिक रुपमा ७ वटा कार्यक्रम गर्दै छ । महिला विरुद्ध सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र विभेदलाई कसरी कम गर्दै जाने र सबै महिलाको कानूनी पहँुचमा कसरी सहज हुन्छ भनेर हामीले सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका हौं । तेस्रो कुरा चाहि वीरगंज वोर्डर नजिकै भएको कारणले पनि बालबालिकाहरु हराउने, वेवारिसे फेला पर्ने, दूव्यवहार र शोषण जस्ता घटना धेरै हुने भएकोले त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भनी योजना साथ अगाडी बढ्दै छौं ।
३) कार्यक्रम सबै शहर केन्द्रित मात्र देखिन्छन् नि ?
वडास्तरमा पनि कार्यक्रम गरिन्छ । सबै वडाभन्दा आन्तरिक स्रोतबाट जति आउँछ त्यतिको कार्यक्रम गर्ने हो । केन्द्रस्तरबाट कुनै किसिमको महिला तथा बालबालिकाको लागि यो १६ दिने अभियानको बजेट आएको छैन । त्यसैले गर्दा हामीसंग जे आन्तरिक रुपले हुन्छ र आर्थिकरुपले थेग्न सकिन्छ त्यसरी नै गर्दै जाने हो ।
नगरस्तरमा केही आन्तरिक कार्यक्रम भयो भने पनि बढी जसो वडास्तरमा नै कार्यक्रम हुन्छ । हाम्रो नौ वटा सहकारी संस्था सबै ग्रामीण भेगमा नै छन् । यो संगसंगै यौनिक र लैङ्गिक हिंसा तेस्रो लिङ्गीहरुलाई पनि फोकस गरेर हाम्रो समाजमा भइरहेको भेदभाव र समाजले स्विकार्न नसकेको, उहाँहरुको समस्यालाई समाजले सम्बोधन गर्न नसकेको समस्यालाई पनि एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ । यो १६ दिने अभियानमा मात्र काम गरिन्न । बर्षदिन हाम्रो योजना हुन्छ । यसलाई अलि व्यापक र सबै संघ संस्थाको ध्यानआर्कषण हुने र सामाजिक संजाल देखि लिएर मिडिया सबैलाई ध्यानाआर्कषण गराउने गरी गर्दै छौं ।
४) बजेटकै कुरा गर्दा यस अभियानको लागि पालिकाले कति बजेट छुट्याएको छ ?
यो १६ दिने अभियानभन्दा पनि दिवसिय कार्यक्रम आयेजना गर्नको लागि महानगरले ५० हजार देखि १ लाखसम्म छुट्याएको छ । यस भित्र नै सबै संघ संस्था लगायत हामीहरुले पनि खर्च गर्नुपर्छ । ग्रामीण भेगमा भएको सहकारीहरुले पनि कार्यक्रम गर्दा यसै भित्र खर्च हुनुपर्छ ।
५) जुन बजेट छुट्याएको छ । त्यो लैंगिक मैत्री छ त ?
यसमा राज्यको ध्यान जानु पर्ने हो । राज्यले हरेक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य सबै ठाउँमा लगानी गर्नु पर्दछ । संघ संस्थाले लगानी गरिरहेका छन् । महिलाहरुको विषयलाई कसरी छोडेको होला । आन्तरिक स्रोतले स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । यो पनि प्रयाप्त चाहि होइन । तर पनि सरकारले नगरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई कुनै चासो नै छैन । लैंगिक हिंसाको विषयमा पालिकालाई कसरी समन्यव र सहकार्य गर्ने भन्ने कुनै चासो देखिन्न । अहिलेुसम्म पनि संघले बोलाएको छैन । जे गरिरहेका छौ त्यो हामी आफैले गरिरहेका छौ ।
६) पालिकाबाट कुनै कोष खडा भएको छ कि छैन ?
लैङ्गिक हिंसा निवारणमा पीडितहरुको लागि राहत तथा उद्दारको लागि महानगरमा कोष स्थापना भएको छ । यो १ वर्ष भैसकेको छ । लैंगिक हिंसा पिडित महिला या पुरुष जो पनि हुन सक्छ । पिडितहरुलाई यही कोषबाट सहयोग गर्ने गरेका छौ । हामीले एकजना पिडितलाई पनि सहयोग गरेका छौ । यसमा धेरै रकम अपर्याप्त भएको हुनाले मन्त्रालयसंग सहकार्य गरेर २ लाख क्षतिपूर्ति पनि दिलाएका छौ । अहिले हाम्रो कोषमा लगभग रु.१ लाख छ ।
७) हिंसा न्यूनिकरण तथा नियन्त्रणको लागि महानगरपालिकाको आगामी योजना के छ ?
महानगरमा ३२ वटा वडा छन् । हामीले विस्तारै स्रोत, साधन, जनशक्ति परिचालन गरी भ्याएसम्म सबै वडाहरुमा समूहहरु विस्तार गरेर, निगरानी समूह गठन गरेर महिलाहरुको सामान्य झैझगडालाई वडास्तरमा नै समाधान गर्ने योजना छ ।
ठूलो झैझगडा चाहि महानगरपालिका भित्र न्यायिक समितिमा ल्याई यहाँ निरुपण गर्ने तयारी छ । यसको लागि हाम्रो शाखाको फोकस चाहि सबै वडामा हामीले महिलाहरुलाई जबसम्म समूहमा राख्न सकिन्दैन र एकिकृत गर्न सकिन्दैन र सामूहिक रुपमा जबसम्म महिलाको आवाज बुलन्द हुदैन । तबसम्म हिंसा न्यूनिकरणमा सहयोग हुन सक्दैन भन्ने नै हो । यसको लागि हरेक वर्ष वडाहरु विस्तार गर्दै गइरहेका छौ । विस्तारै वडाहरुमा समूह विस्तार गर्नै महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा कसरी फोकस गर्न सक्छौ ? भन्ने ध्यान दिएर आर्थिक रुपमा सबल बनाएर हिंसा न्यूनिकरणमा जोड दिनु रहेको छ ।
#महिला वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा
आइतवार, मंसिर १२, २०७८, ०३:११:००
फूर्सदको समय घरैमा बसेर भए पनि उत्पादनमा लगाऔं : व्यवसायी रुबी
दमदार साहित्यको उपस्थिति भए यो क्षेत्र उपेक्षामा पर्दैन : साहित्यकार न्यौपाने
साहित्यलाई खुशीको भण्डारको रुपमा हेरेको छु : डा. नाज
लक्षण देखापर्नु पूर्व नै पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुनसक्छ : डा.रुबिना
मुटु जोगाउन नियमित परिक्षण आवश्यक : डा भट्टराई
भदौ ३०, २०७८ निलम पंत
त्रिशक्ति मिलेर अगाडी बढेमात्र विद्यालयको गुणस्तर उक्सिन्छ : प्रधानाध्यापिका गिरी
भदौ ४, २०७८ निलम पंत